မြွေဆိုးလေးမှာ အရေပြားပြဿနာရှိနေပြီလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် မြွေဆိုးလေးမှာ အရေပြားပြဿနာရှိနေပြီလား?
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ မြွေဆိုးလေးနာကျင်တာတွေ၊ ယားယံတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိလိုရာမေးကနေ ချိဖတို့ အမေးများတဲ့ မြွေဆိုးလေးမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာ (၅) မျိုးကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
တခါတလေမှာ ချိဖတို့အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အားနည်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တွင်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိင်တံပေါ်မှာ အဖုလေးတွေ ထွက်တတ်ပြီး ဒီလိုအဖုမျိုးတွေက သာမန်အားဖြင့်တော့ နာကျင်မှုမရှိတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အဖုတွေက နာနေမယ်… တဆစ်ဆစ် ကိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်ခံရတဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါ အထိတောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အနာဖုလို နာကျင်မှုမျိုးတွေ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
နှင်းခူနာဆိုတာကလဲ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်တတ်သလို လိင်တံမှာလဲ အဖြစ်များပါတယ်။ အနာဖုနဲ့ မတူတဲ့ နှင်းခူနာရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အနီရောင် ဒါမှမဟုတ် ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့ ယားနာကွက်လိုမျိုးရှိမယ်၊ နှင်းခူနာအနီးတဝိုက်က အရေပြားတွေ ခြောက်ပြီး ယားယံမယ်၊ ထိလိုက်ရင် ချောမွေ့မနေဘဲ ကြမ်းတမ်းနေမယ်၊ ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအနာကနေတဆင့် သွေးလို ၊ ပြည်လို အရည်တွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
(၃) လိင်အင်္ဂါ ရေယုန်
လိင်အင်္ဂါရေယုန်ဆိုတာကတော့ အဖြူရောင်နဲ့ အနီရောင်ရှိတဲ့ ရေကြည်ဖုတွေဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေတဆင့် ကူးစက်တဲ့ HSV ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြွေဆိုးလေးပေါ်မှာ ရေယုန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း နာမယ်၊ ယားမယ်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်ရင်တော့ ဆီးသွားရ ခက်ခဲလာမယ်။ ဒီလို လိင်အင်္ဂါ ရေယုန်တွေအတွက် အရှင်းကုသနိုင်မယ့် ကုသနည်းမရှိပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာပြတာ လျော့နည်းသွားအောင်၊ ကိုယ်ကနေတဆင့် တခြားသူဆီ ကူးစက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်အောင်တော့ ဆေးပညာအရ လုပ်လို့ရပါတယ်။
(၄) လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့
လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့ဆိုတာကတော့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ တဆင့်ကူးစက်တဲ့ HPV ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကနေ ဖြစ်ပွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါရေယုန်ကတော့ အညိုရောင်နဲ့ ပန်းရောင်ရှိတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီလို အပွင့်ပုံသဏ္ဍာန် အဖုလေးတွေ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ မသက်မသာခံစားရမယ်… ယားမယ်… ဒါ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ နာကျင်မှု ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူမှာ ဖြစ်ခဲ့ရင် အချိန်တိုအတွင်း ပွားလာတတ်ပါတယ်။
အားလုံး ကြားဖူးကြတဲ့ ဝဲ ဆိုတာကတော့ အဖြစ်များတဲ့ ယားနာရောဂါတစ်မျိုးပါပဲ။ မြွေဆိုးလေးပေါ်မှာ မူမှန်မဟုတ်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အဖုလေးတွေ ထမယ်၊ တခြား အရေပြားပြဿနာတွေမတူဘဲ တမူထူးခြားတဲ့ ပိုဆိုးတဲ့ လက္ခဏာကတော့ ဝဲဆိုတဲ့အတိုင်း မခံမရပ်နိုင်အောင် ယားတာပါပဲ။ မကုတ်ရမနေနိုင်လောက်အောင် ယားတဲ့အတွက် ခဏ ခဏ ကုတ်မိမယ်… အဲ့တော့ ကုတ်လို့ အသားပွန်းပဲ့တာကနေ ပိုးဝင်ပြီး နောက်ထပ် အရေပြားပြဿနာတွေ ထပ်ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် တခြားကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းမှာ ပေါက်တဲ့ ဝဲနဲ့ လိင်အင်္ဂါပေါ်မှာ ပေါက်တဲ့ ဝဲ မတူညီတာတစ်ခုကတော့ မြွေဆိုးလေးပေါ်က ဝဲက တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး အားနည်းလို့ ပေါက်တာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကနေ တဆင့် ကူးစက်တာက ပိုများပါတယ်။